ABO fii Dh.D.U.O’n : Araaraa fi Jijjiirama Eegalame Milkeessuuf Wal Amanuu fi Wal Irratti Abdachuu Feesisa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsABO fii Dh.D.U.O’n : Araaraa fi Jijjiirama Eegalame Milkeessuuf Wal Amanuu fi Wal Irratti Abdachuu Feesisa
ABO fii Dh.D.U.O’n: Araaraa fi Jijjiirama Eegalame Milkeessuuf Wal Amanuu fi Wal Irratti Abdachuu Feesisa
(SBO/VOL – HAGAYYA 18,2018) Waliigalteen Hagayya 07, 2018 ABO fi Mootummaa Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame ummata keenya keessatti gammachuu daangaa hin qabne uume. Erga sanaa as ummatni keenya hanga miira isaa tohachuu dadhabutti biyya keessaa fi biyyoota alaattis haala gara garaatiin gammachuu isaa ibsachaa jira. Kun mallattoo Nagaa fi Araaraa ti. Dheebuu Bilisummaa kan baroota dheeraa keessaa madda.
Demokraasii dhugaatti cehumsa taasifamu danquuf sochii seera alummaa taasifamu kamiyyuu ol’aantummaa seeraa kabachiisuun dhaabsisuuf akka hojjetan Hoggantoonni Dh.D.U.O. fi ABOn Jaal Daawuud Ibsaatiin hogganamu ibsa waliinii gaazeexeessitootaaf kennaniin mirkaneessaniiru.
Waajjira Giddu-galeessaa Dh.D.U.O.tti hogganaan Damee Ijaarsaafi Siyaasaa baadiyaa Ob. Addisuu Araggaa fi Dubbi himaan ABO Ob. Toleeraa Adabaa haala yeroo ilaalchisee ibsa waliinii gaazeexeessitootaaf kennaniin gochaa seera dhabeessummaa maqaa ABO tiin taasifamaa jirus ta’e shirawwan cehumsa siyaasa Oromoo danquuf taasifaman kamiyyuu karaa ol’aantummaa seeraa kabachiisuutiin adeemsa seeraatti deebisuuf akka hojjetan hubachiisaniiru.
Waajjira Giddu-galeessaa Dh.D.U.O.tti hogganaan Damee Ijaarsaafi Siyaasaa baadiyaa Ob. Addisuu Araggaa ibsa isaanitiin akka mirkaneessanitti, Dh.D.U.O.n qabsoo cimaa taasiseen aadaan siyaasaa moofaan halaalaa wal-balaaleeffachuu, walsakaaluu godaannisni miidhama keenyaa osoo hin fayyiin akka bubbulu taasisurraan kan hafe, akka Oromootti bu’aan nuuf buuse akka hin jirre irratti waan waliigalameef, aadaan siyaasaa waldhaggeeffachuu, ilaafi ilaameen utubaawwan qabsoo Oromoo irratti waliigaluu akka uumamu taasisuun gara demokraasii dhugaatti cehaa jirra.
Yeroo murteessaa cehumsa qabsoo Oromootiif tokko taanee socho’aa jirrutti, gochaawwan seeradhabeessummaa hidhatanii ummata keessa socho’uu, manneen barnootaa cabsuun kaampii waraanaa godhachuuf deemuu, saamichaa fi ajjechaan maqaa ABOtiin taasifamaa jiru qulqullaa’uun adeemsa seeraatiin furmaata argachuu qabas jedhan. Akka mootummaattis ol’aantummaa seeraa kabachiisuuf itti gaafatamummaa guddaan waan jiruuf, dirree siyaasaa bal’isuuf sochii jalqabame karaa hin miineen ol’aantummaa seeraa kabachiisuuf xiyyeeffaannaadhaan akka hojjetamus hubachiisaniiru.
Dubbi himaan ABO Jaal Daawuud Ibsaatiin hogganamuu ibsa isaanii keessatti akka mirkaneessanitti, ABO akka jaarmiyaa siyaasaa Oromoo tokkootti kan ijaarame, ummata Oromoo irratti roorrisuufi nagaa isa dhoowwuuf osoo hin taane, roorroo keessaa baasee nageenyaa fi demokraasii ummatichi hawwu gonfachiisuuf waan ta’eef, sochiin seera alummaa qabsoo ummata Oromoo danqu kamiyyuu dhaabbaticha kan bakka hin buune ta’uu isaati. Mootummaa biyya bulchu waliin waliigaltee uumuu duraa jalqabee dhukaasni kamiyyuu akka dhaabatu ibsa kennuu isaanii kan hubachiisan Ob. Toleeraan, dhimmoota bu’uuraa qabsoo Oromoo irratti mootummaa waliin waliigalteerra erga gahameen boodas yoo ta’e, Waraanni ABOs ta’e miseensonni isaa adeemsa cehumsaa gara demokraasii dhugaatti taasifamu kana akka hin danqine kallattii keenyeerra jedhan.
Gochaan kun sochii maqaa ABOtiin qabsoo Oromoo dadhabsiisuu waan ta’eef, shira gama kanaan hojjetamu sakata’anii adda baasuun akka eegametti ta’ee, miseensi ABO maqaa kana qabatee nagaafi tasgabbii ummataa booreessu yoo jiraate seeratti akka dhiyaatu taasisuun ol’aantummaa seeraa kabachiisuuf kan hojjetan ta’uus himaniiru.
Bal’ina ibsa kanaa itti fufiinsaan kan isiniif dhiyeessinu ta’a.
OPDO – Official
Obbo Lammaa Magarsaa, Prizedaantii Oromiyaa ibsa kanaaf galatoomi. Carraa guddaa Waaqayyo siif kenne kanaafis hooqubaan isaaf haata’u jedhi. #ABOn biyya galuun mirkanuma ture. Dhugaaf taanaan ati ayyaanqabeessadha. Dhumakee miidhagfatte. Kana booda WBO/ABO nis kabajaa siif qaba. Cubbuukeellee siif dhiisa. Ammas danqaafi danqaraa hundumaa ABO/WBO jalaa kaastee abbaa biyyaa biyyaasaafi sabasaatti akka dabarsitu #TIM abdii qaba. Baga gammadde, Baga Gammaddan!….Toora milkiirra jirra Oromoo!!!
“Ibsi OPDO har’aa, haasaan Lammaa har’aa amaloota fokkisoo isaanii kaleessaa guutuutti qaba jechuu dandeenya.
– Of tuulummaa jira
– of dhaadeessuu jira
– anatu sii kenne gab jedhii jira
– dhukaasuun hinfeesisuu Qawwee fannisii jira
– uummata barsiifachuun seeraan ala jechuutu jira
– Kottuu naaf hojjedhuu jira
– kottuu hojii na gargaariin ammoo ittuu akka jaldeessaa of bokoksuu qabdi
Kanaaf ibsa sana guutummaatti akka dhuunfaatti hinfudhadhu! Ibsa fofokkisaa tuullaa shiraa qabatee baafame kana guutuutti nan jibbe.
Obbo Lammaan akka qabsoon ABO isa dhalche dagachuunsaa daba. Yeroo halagaan Qawwee wal hidhachiisaa jirutti Qawwee hinfeenu jechuun ammoo aantummaa biyyaa dhabuusaanii saaxileera. Ibsa kanaan Qeerroon burjaajaa’uu hinqabu. Qabsoon ammallee finiinuun jara kana agarsiisuu feesisa.”
Yaada kiyyadha Qalbeessaa Dhangi’aa